Onye nke Anọ? Onye nke ise? Onye na-atụ asụsụ asụsụ na ahia | Martech Zone
Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ntụle ziri ezi, mana m na-eche echiche banyere ịre ahịa weebụ taa wee wee nwee echiche. M na-ekwukarị banyere adịghị ike na weebụsaịtị ndị bụ 'akara ngosi'. Ana m agụ Mkparịta ụka gba ọtọ: Otu blọọgụ na-agbanwe Wayzọ azụmaahịa na ndị ahịa na-ekwu ọ na-ekwukwa otu okwu ahụ. Achọpụtara m na ikpe mara m dị ka onye na - esote - ebe m wuru ọtụtụ saịtị anaghị anabata mmekọrịta ọ bụla. Emechara m ịgụ 'The Catcher in the Rye'. Styledị ederede Salinger ji eme ihe ọchị n'ihi na ọ na-akparịta ụka.
Mgbe anyị lere anya onye ụtọasụsụ, ndị edemede nwere ike ide banyere M, anyị, gị, ma ọ bụ ha. A maara nke a dịka "Onye mbu", "Nke abụọ" na "Nke atọ" n'otu n'otu. Echiche m bụ na ahịa ahụ adịchaghị iche. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahụ ebe nrụọrụ weebụ nke edere na echiche nke Onye Mbụ, nke Abụọ, ma ọ bụ nke atọ. Mana, dị ka ịgụ akwụkwọ, echiche ndị ahụ amachaghị. Ọ bụ onye edemede na-agwa gị, onye na-agụ ya. Enweghị ohere ị nwere ịjụ ajụjụ ma ọ bụ nye nzaghachi.
Ohere maka ahia dijitalụ na nchekwa data bụ na ha nwere "Onye Anọ" ma ọ bụ "Nke ise" nwere ezi uche. Nke ahụ bụ, Onye nke anọ nwere ike ịhapụ onye na-agụ ya ka ya na onye edemede ahụ nwee mmekọrịta. Nke a nwere ike ịbụ ihe na-ekwu na blọọgụ, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ ebe nrụọrụ weebụ, nyocha siri ike n'ime ụlọ, ụdị nzaghachi, wdg. Nke a na-enye ohere nkwukọrịta ụzọ abụọ, ahụmịhe bara ọgaranya karị.
"Onye nke ise" na-ewere nzọụkwụ ọzọ n'ihu. Gini banyere ikwe ka ndi na - agu akwukwo gwa ndi ozo. Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị kwere ka ndị ahịa gị dee banyere gị site na weebụsaịtị gị? Egwu? N’ezie, ọ bụrụ na ị naghị ege ha ntị. Mgbe ị naghị ajụ nzaghachi n'aka ndị ahịa gị ma mee mgbanwe dabere na nzaghachi ahụ, ịkwesighi ichegbu onwe gị. Nzaghachi na ndị ahịa agaghị adịte aka!
Aga m agbagha òtù dị iche iche iji hụ na mbọ ahịa ha na-agba niile nke dị n'elu:
Kwue gbasara onwe unu. (Anyị)
Gwa ndị ị na-atụ anya ya. ())
Na-ekwu maka ndị ahịa gị (Ha)
Kwe ka ndị ahịa gị gwa gị (Hey)
Kwe ka ndị ahịa / atụmanya gị gwa gị okwu (Me).